Maraykanka Oo Ka Saaray Itoobiya Heshiiska Ganacsiga-AGOA – Rasaasa News
Maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa ku dhawaaqay 1-dii Jannaayo in ay Itoobiya, Mali iyo Guinea ka saareen heshiiska ganacsiga Maraykanka iyo Afrika, iyada oo la sheegay in saddexdan dawladood ay jabiyeen mabaadii’da heshiiska.
“Maraykanku wuxuu maanta Itoobiya, Mali iyo Guinea ka joojiyey barnaamijka door bida ganacsiga ee AGOA, sababtuna waa tillaabooyinka ay qaadeen dawladahan oo ku xad-gudbay xeerka AGOA,” wakiilka ganacsiga Maraykanka hadalkan yidhi.
Xeerka kobaca iyo fursadaha Afrika (AGOA) ayaa la sameeyay sanadkii 2000 markaas oo uu maamuli jiray madaxweynihii hore ee Bill Clinton si loo fududeeyo loona xakameeyo ganacsiga u dhexeeya Maraykanka iyo Afrika.
Laakiin Maraykanku wuxuu “aad uga walaacsan yahay isbeddelka aan dastuuriga ahayn ee dawladaha Guinea iyo Mali,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Waxa kale oo ay walaac ka muujisay “xadgudubyada ba’an ee xuquuqul insaanka ee caalamku aqoonsan yahay ee ay gaysanayaan dawladda Itoobiya iyo dhinacyo kale iyada oo ay jirto colaadda sii ballaadhanaysa ee waqooyiga Itoobiya.”
“Waddan kastaa wuxuu leeyahay halbeegyo cad oo loo maro dib-u-soo-celinta, maamulkuna wuxuu la shaqayn doonaa dawladooda si loo gaadho hadafkaas,” USTR ayaa tiri.
Sida uu dhigayo heshiiska AGOA, kumannaan badeecadaha Afrikaan ayaa ka faa’iidaysan kara hoos u dhiga canshuuraha wax soo dajinta, iyada oo ku xidhan shuruudaha la buuxinayo ee khuseeya xuquuqda aadanaha, maamul wanaagga iyo ilaalinta shaqaalaha, iyo sidoo kale in aan lagu dabaqin xayiraad kastam badeecadaha Maraykanka ee dhulkooda.
Sannadkii 2020, 38 waddan ayaa u qalmay AGOA.
Covid-19 Infection Spreading In Ethiopia